Ma soo dejisan karaa codsiyada | Androidsis
Maxaan u soo dagsan waayey barnaamijyada
Ignacio Sala | 21/05/2021 18:00 | Codsiyada Android
Mid ka mid ah dhibaatooyinka inta badan saameyn ku yeelan kara khibradeena isticmaale ee ku saabsan Android waa goorma ma soo dejisan karo barnaamijyadooda. Qalabka mobilada ee aan lahayn codsiyada wuxuu noqdaa taleefan nololeed, oo aan ku wici karno iyo wax kale oo yar.
Thanks to noocyada kala duwan ee codsiyada ah ee aan ku hayno qashinka Play Store, ficil ahaan waan sameyn karnaa wax kasta oo aan ka fikiri karnoKa soo dir dukumiintiyada boostada, sameynta shirarka fiidiyowga, qorista nooc kasta oo dukumiinti ah ama xaashiyaha, hubinta cimilada ...
Sababaha uusan terminalkeenu noo oggolaaneyn inaan kala soo baxno codsiyada way ka duwan yihiin mar walbana lama xiriiraan. Haddii aad halkan timid, waayo barnaamijyada kama soo dejisan kartid Play StoreWaa kuwan tallaabooyinka la raacayo si looga gudbo dhibaatadan.
1 Hubi khadkaaga internetka
2 Ma haysataa meel kugu filan?
3 Hubi in arjigu ku habboon yahay qalabkaaga
4 Nadiifi kaydinta Bakhaarka ciyaarta
5 Qalabkaaga dib u bilow
6 Malaha adeegyo Android ah
Hubi khadkaaga internetka
Waxa ugu horeeya ee la iska hubiyo goorta uu terminalkeenu noo ogolaan doonin inaan kala soo baxno codsiyada waa hadii aan leenahay internet. Si tan loo sameeyo, waxaan kaliya u baahanahay inaan hubino haddii baarka kore, halka waqtiga lagu muujiyay, uu sidoo kale muujinayo astaan ​​u eg qaab koor rogan (Wi-Fi) ama isku xirnaanta xogta nooca 3G, 4G, EDGE ama 5G.
Haddii astaamahan midkoodna aan lagu soo bandhigin baarka kore ee shaashadda, taas macnaheedu waa ma lihin qadka internetka, marka waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa xalinta dhibaatadan. Habka ugu dhaqsaha badan ayaa ah helitaanka xarunta kontoroolka adiga oo fartaada ka dhajinaya shaashadda dusheeda iyo hubinta haddii astaamaha isku-xirka Wi-Fi iyo isku xirka xogta (xogta moobiilka) la hawlgalay.
Ma haysataa meel kugu filan?
Sabab kale oo ah sababta uu u awoodi kari waayey inuu degenaheena kala soo baxo barnaamijyada aan u baahanahay waxaa laga helaa booska keydkeena. Haddii qalabkeenu buuxo, Play Store ayaa na tusi doona farriin nagu martiqaadeysa inaan tirtirno codsiyada aynaan mar dambe adeegsan.
Haddii boodhadh la muujiyo, waxaan ku samayn karnaa jeegga gacanta anaga oo dhex marna aaladaha aaladdayada, anaga oo marin u heleyna liiska keydka. Meenishkan gudahiisa, booska nidaamka kujiro, booska ay kujiraan codsiyada, booska ay daganyihiin sawirada iyo fiidiyowyada, booska ay kujiraan dukumiintiyada iyo feylasha iyo booska bilaashka ah oo ay la socoto wadarta guud ee xarunta.
Haddii aadan awoodin, ama aadan rabin, ama tirtirin mid ka mid ah codsiyada, sawirrada, fiidiyowyada ama xogta ku kaydsan bartaada, xalka ugu dhaqsaha badan ayaa ah iibso kaarka microSD iyo u wareejinta qayb ka mid ah waxa ku jira terminalka kaarka dibadda.
Haddii boosteejadaadu aysan lahayn meel lagu balaariyo meesha lagu keydiyo iyada oo loo marayo kaarka microSD, xalka kaliya ayaa ah u wareeji sawirrada iyo fiidiyowyada kombuyuutarkayaga inaanan u baahnayn inaan markasta gacanta ku hayno xarunteena si aan u helno meel bilaash ah.
Hubi in arjigu ku habboon yahay qalabkaaga
Maaddaama Google ay soo saareyso noocyo cusub oo Android ah, qaar badan ayaa ah barnaamijyada loo cusbooneysiiyo bixi shaqada cusub intaas ayaa lagu daray. Haddii badhanka si aad ugala soo baxdo barnaamijyada Play Store uusan muuqan, waa inaan hubinaa faahfaahinta arjiga inuu la jaan qaadayo nooca aan ku rakibnay kombuyuutarkeena.
Soosaarayaasha waaweyn (Facebook, Microsoft, Google ...) waxay u oggolaadaan dadka isticmaala qaabab duug ah, sii wad soo dejinta noocyada hore.
Si kastaba ha noqotee, horumariyeyaasha badankood, sababo kala duwan awgood, ma sii haysan karaan laba codsi dukaanka Google, markaa haddii aadan rakibi karin codsi gaar ah ha noqon aaladdaada mid ku habboon noocaas, waxa kaliya ee aad sameyn karto waa inaad dhex marto APK Mirror oo aad kala soo baxdo nooc duug ah.
Nadiifi kaydinta Bakhaarka ciyaarta
Waxay u badan tahay in dhibaatadu aysan ku jirin qalabka laftiisa marka laga reebo codsiga Play Store. Si aan meesha uga saarno inay taasi tahay dhibaatada, waa inaan faaruqino keydka arjiga. Nidaamkan tirtiri doonaa dhammaan xogta jirka in dalabku ku keydsan yahay qalabkeena si aan ugu dhejino waxyaabaha sida ugu dhakhsaha badan.
Marka xigta ee aan markale bilowno arjiga, waxay qaadan doontaa waxoogaa ka dheer sidii caadiga ahayd si aan u bilowno una soo bandhigno dhammaan waxyaabaha jira. Si loo nadiifiyo keydka Play Store, waxaan marin u helnaa aaladaha aaladdayada, guji barnaamijyada oo raadi Google Play Store iyo waxaan helnaa xogta keydka si meesha looga saaro.
Qalabkaaga dib u bilow
Dib uga noqoshada waqtiga waa guul. Hadalkan waxaa lagu dabaqi karaa nidaam kasta oo ku shaqeeya. Markaan la kulanno dhibaatooyin xagga hawlgalka ah oo ku saabsan qalab uu maamulo nidaamka hawlgalka, kiiskeenna Android, oo aan midkoodna xalkii hore shaqeyn, waxa ugu wanaagsan ee aan sameyn karno dib u bilaw qalabkeenna.
Markaan dib u bilowno qalabkeenna, terminal-ku wuxuu mar kale bilaabmayaa gelinaya "wax walba meeshiisa". Sidan oo kale, haddii mid ka mid ah xalalkii hore uusan xallin dhibaatada markii la rakibayo codsiyada, waxay u badan tahay inay tahay geedi socod si fudud oo waliba caqli-gal ah, xalli.
Si aan dib ugu bilowno aaladda, waa inaanu riixnaa oo aan qabanaa badhanka aan ku damineyno shaashadda bartayada illaa inta uu ka muuqanayo Waxay nagu martiqaadeysaa inaan xirno ama dib u bilowno qalabka. Mar alla markii ay damiso gebi ahaanba, waxaan riixnaa oo qabannaa isla batoonka mar labaad illaa shaashadda ay daaran tahay ama uu terminalku gariirayo
Malaha adeegyo Android ah
Si toos ah loogala soo baxo barnaamijyada Play Store, waa lama huraan in terminalkeenu leeyahay adeegyo Google iyo in kale. Adeegyada Google aad ayey uga badan yihiin oo keliya codsi. Adeegyada Google waxaan ku heli karnaa dhammaan barnaamijyada Google noo diyaariyo, barnaamijyada si adeegsadayaal badan, waxay noqdeen lama huraan.
Ka dib diidmada qayaxan ee dowladda Mareykanka ilaa Huawei, soo saarahaan kuma jiraan adeegyada Google, sidaa darteed waxaa nagu qasbay inaan maciinno dukaanka ay iska leedahay shirkadda Huawei ee loo yaqaan AppGallery. Dhammaan codsiyada laga heli karo dukaankan waxay ka shaqeeyaan dhammaan boosteejooyinka soo saaraha.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad nuqul ka sameysatid moobiilka Huawei ee aan lahayn adeegyada Google, ma shaqeyn doono, tan iyo u baahan maktabadaha Google waxaa ka mid ah Adeegyada Google, maktabadaha lagama maarmaanka u ah hawlgalka arjiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Maxaan u soo dagsan waayey barnaamijyada
5-ta kulan ee ugu fiican ninja ee Android
6 barnaamij ee jadwalka ugu wanaagsan ee la wadaago ee loogu talagalay Android